Ciidanka Qaranka Somaliland Ee Ku Sugan Jiida Saaxdheer Oo Buuhoodle Kusoo Ruqaansaday iyo Sababta |
Ciidanka Qaranka Somaliland Ee Ku Sugan Jiida Saaxdheer Oo Buuhoodle Kusoo Ruqaansaday iyo Sababta
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Buuhoodle ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Qaranka Somaliland eek u sugnaa jiidda hore ee Saaxdheer ay ku soo ruqaansadeen Buuhoodle oo ay ka dareemeen dhaq-dhaqaaq ciidan.
Ciidamada Qaranka Somaliland ayaa waxay dareemeen dhaq-dhaqaaq ciidan oo ah ciidamo maleeshiiyaadka Buuhoodle ee kasoo horjeeda wada hadalada Somaliland iyo kooxda Khaatumo kuwaas oo ay dabada ka riixayaan maamulka Puntland iyo maamulka xamar ,isla markaana gudaha Buuhoodle mudooyinkii danbe ka waday qabanqaabada shir ay ku qabanayaan Buuhoodle.
Magaalada Buuhodle iyo deegaanada ku xeeran ayaa xiisad ka taagan tahay maalmihii u danbeeyey,waxaana ciidamada Qaranka Somaliland ay hadh iyo habeen heegan ugu jiraan adkaynta nabadgaliyada gobolada Somaliland,waxaana ciidamada Qaranka Somaliland ay galeen heegan culus.
Xukuumadda Somaliland ayaa shaaca ka qaaday inaanay ogalaanayn marnaba in magaalada Buuhoodle lagu qabto shir lagaga soo horjeedo qaranimada Somaliland iyo shir lagaga soo horjeedo wada hadalada Somaliland iyo kooxda khaatumo.
Wixii Kasoo Kordha Arintaa Kala Soco Gabiley.Net